> Resource > Video > Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si MOV
Sida dadka intooda badan, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay wax ka bedel video files in Windows Live Movie abuuray. Haddii ay sidaas tahay, waxaa laga yaabaa in badan oo files mashruuca WLMP kaydiyaa on your computer. Laakiin waa 's nixi in files mashruuc aan la si weyn loo isticmaali karaa. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad ka ciyaari WLMP on QuickTime, iPad, iPhone, xitaa geliyaan si ay u YouTube, aad leedahay si loogu badalo WLMP in qaab MOV loogu isticmaalo. Next, waxaana idin tusin doonaa sida loo sameeyo shaqadan effortlessly.
Windows Live Movie Kan sameeyey, oo u ogolaanaya oo kaliya si aad u badbaadin files mashruuca WLMP sida wmv videos. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan video kale Converter in dheeraad ah loogu badalo videos si ay u jecel yahay in aad MOV videos. Halkan, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) si weyn lagu talinayaa. MOV ka sokow, waxa ay keeneysaa in loogu badalo videos in shiidaa kasta oo kale oo ah qaabab video sida MP4, MKV, AVI, FLV, 3GP, VOB, ASF, iwm ugu muhiimsan, tayada diinta video iyo xawaaraha waa mid aad u la yaab leh.
Kaliya in aad raacdaa hage hoose si loogu badalo files WLMP si aad u MOV files talaabo talaabo ah. Markaas, waxaad ka ciyaari kartaa in aad files WLMP sida aad jeceshahay.
1 files Save WLMP sida wmv video files
Waxaad dhoofin karo WLMP files si wmv video files leh Windows Live Kan sameeyey Movie laftiisa. Marka hore, ordo Windows Live Movie abuuray. Labaad, dajiyaan aad files WLMP adigoo gujinaya "File mashruuca Open". Saddexaad, guji "File" mar iyo dooro "Save the movie" doorasho inay u dhoofiyaan si qaab wmv. Ogsoonow in ay jiraan goobo kala duwan, sida High-qeexidda (720p), Widescreen (480p), ama Standard-qeexidda. Waxaad dooran kartaa waxa aad rabto.
2 Import video files si WLMP si MOV video Converter
Import wmv video files adigoo riixaya badhanka on dhinaca kore ee bidix ee interface ka. Haddii kale, waxaad si toos ah jiidi karo files wmv in ay leeg- tahay diinta this app ee. Waxa uu na tusay sida soo socota.
3 Dooro MOV sida qaab wax soo saarka
In ay guddi Qaabka Output, waxaad sidoo kale la furo saarka liiska hoos-hoos qaab ama guji image qaabka hoos ku qoran. Markaas, qaab wax soo saarka daaqadan app ee la furay, halkaas oo aad u baahan tahay in ay doortaan "Qaabka"> "Video"> "MOV".
4 Beddelaan WLMP in MOV
Hit ah "Beddelaan" button on geeska midig ugu hooseysa WLMP si MP4 ah video Converter 's interface ugu weyn. App Tani samayn doonaa waxyaalo intiisa kale. Haddaba, waxa aad ka arki kartaa qataarrada horumarka diinta.
Markii diinta la dhammeeyo daqiiqado yar ka dib, note ah ka muuqan doonaa geeska midig hoose ee shaashadda your computer ee. Markaas, waxaad riixi kartaa fursad u Folder Open waxaa si aad u ogaato faylasha la gediyay MOV. Sidaas, si aad u MOV video files badalo kartaa files mashruuca WLMP loo isticmaali.